Devozione del giorno: il dovere di pregare per le anime dei defunti | PREGHIERA&NEWS
Oge nke ubochi: oru ikpe ekpere maka nkpuru obi ndi nwuru anwu
Paolo Tescione	Edere ya November 5, 2020
Ọrụ nke okike. Can nwere ike ịhụ onye na-arịa ọrịa nke ọnyá juru, na-enweghị ọmịiko? Can nwere ike ịhụ onye ogbenye nwụrụ n’okporo ụzọ n’enweghị enyemaka? Ọ bụrụ na onye mkpọrọ nọ n’agbụ gosi gị onwe gị, na-arịọ gị ka ị gbajiri agbụ ya, ọ́ bụghị ya, ọ bụrụ na ị ga-emeli ya? Ọfọn mgbe ahụ: okwukwe na-ese mkpụrụ obi gị na-asụ ude na-egbu mgbu, na-ata ahụhụ n'ịhụnanya nke Chineke, kpọgidere n'ọkụ na-enweghị ike inyere onwe ha aka; na ị gaghị emere ha ebere? Gaghi ekwu otu a Requiem?
Ọrụ nke Okpukpe. Ha niile bụ ụmụnne gị nwanyị n’ime Jizọs Kraịst; ọrụ ebere n’ebe onye agbata obi gị nyere gị iwu ka ị mee ndị ọzọ ihe ị hụrụ n’anya emere gị. Jizọs ga-ajụ gị ajụjụ ma ọ bụrụ na i mejụọ akpịrị ịkpọ nkụ gị, nye gị nri, yikwasị gị uwe, gaa leta onye agbata obi gị, banyere mkpụrụ obi na pọgatrị; kedu ihe ị ga-aza? Jizọs kwuru na a ga-ejikwa otu ihe ahụ mee ihe maka ndị ọzọ; ị na-eche banyere ya? Jisọsu asụ Sitio, mu sụru lẹ Nchileke ono; i gaghi-eme ha aru dika ozuzu, n'ihi ihunanya nke Jisos?
Ọrụ nke ikpe ziri ezi. Ole ndị bụ mkpụrụ obi ndị ahụ? Ikekwe ndị a na-amaghị ama na ọ gbasara gị. Lee ha anya nke ọma: ha bụ ndị ikwu gị, ndị nna nna gị, ndị na-enyere gị aka, ụmụnne gị, ikekwe ha anọọla ọtụtụ afọ, mana ha ka na-asụ ude n’ụlọ mkpọrọ; ma ị maghị iwu siri ike inyere ha aka? Ma eleghị anya, ha na-emekpa ha n'ihi gị; ma ị naghị eche maka ya? Ọ nwere mkpụrụ obi megburu onwe gị n'ebe ahụ. Mkpụrụ obi ndị ị kwere nkwa ha na-enye ha nsogbu ma ọ bụ ndị i ji ha ụgwọ, ị naghị anụ olu ikpe ziri ezi nke na-akọcha gị?
OMUME. - Gee ntị na Mas dị Nsọ, ma ọ bụ gụọ atọ De profundis.
Nke gara aga Post Gara aga post:Inye Onwe Jesus n’ime onwa a ka emere ndi nwuru anwu
Next Post → Post ozo:Pope Francis chọrọ ka ndị bishọp nwee ikikere Vatican maka ụlọ akwụkwọ okpukpe ọhụrụ
maka ozi zigara email na paolotesc[email protected]